HomeSpainXurgufta Ka Dhex Curatay Pepe & Busquets Oo Soo Jiidatay Alonso, Iyo Colaad Dib Uga Dhex Dillaacday Laba Kooxood
Xabi Alonso ayaa si gaar ah waxa u soo jiitay xurgufta ka dhex curatay laba ciyaaryahan ee Pepe iyo Sergio Busquets, taas oo salka ku haysa markii madaxa lagaga istaagay Pepe kulankii Barcelona iyo Real Madrid ee ka dhacay garoonka Bernabeu 23-kii March.
Pepe ayaa sheegay markii uu kulankaasi dhamaaday in uu Busquets madaxa kaga istaagay, taas oo uu isna dafiray, laakiin markii dambe ayaa dib loo daawaday sawirada muuqaalladii garoonka, waxaana la arkay Busquets oo madaxa kaga taagan Pepe.
Arrintan oo ay dad badani ka hadleen, ayaa waxa isna markiisa afka u kala furay Alonso, waxaanu si toos ah ula saftay xiddiga difaaca uga ciyaara kooxdiisa Real Madrid ee Pepe, waxaanu yidhi “Pepe wuxuu soo bandhigay dareenkiisa, annaguna dhamaantayo waanu taageersanahay. Haddii ay cid kale ahaan lahayd in badan ayaa laga hadli lahaa, annagana Pepe ciyaartoy muhiim ah ayuu noo yahay” sidaas ayuu yidhi Alonso oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Madrid.
Alonso, oo 90 daqiiqadood kooxda Real Madrid u ciyaaray kulankii Borussia Dortmund ee Arbacadii, ayaa waxa kale oo uu ka hadlay natiijadii kulankaas iyo wakhtigii uu ciyaaray, waxaanu yidhi “Way na farxad gelisay natiijadu. Wali waxa hadhsan 90 daqiiqadood oo kale, waananu faraxsanahay laakiin wali maannu nasan.
“Kulamada noo hadhay (La Liga iyo Champions League) way adag yihiin, mana kala dooran karno. Champions League dareen gaar ah ayuu noo leeyahay sannado ayaana ka soo wareegay markii u dambaysay ee aanu ku guulaysannay” ayuu yidhi.